धन्यवाद सधैं परिवार वरिपरि परिक्रामी धेरै परम्परागत छुट्टी भएको छ, टर्की, र फुटबल. तथापि, तपाईंहरू जो यात्रामा रमाईलो गर्नुहुन्छ र द्रुत गेटवे प्रयोग गर्न सक्दछन् यस युरोपमा थैंक्सगिभिंगका लागि भ्रमण गर्न यी एक उत्तम शहरहरूमा यस वर्षको छुट्टीको मौसम खर्च गर्ने बारे विचार गर्नुपर्छ।.
युरोप सामान्यतया पर्यटकहरु संग overcrowded छ, तर एक लेट नोभेम्बर त्यहि भन्न सक्दैन. यसैले किन यो बर्षको अंश हेर्नका लागि उत्तम समय हो पुराना शहरहरु र महान खाना र आश्चर्यजनक गिरावट र colors्गका साथ धन्यवाद परम्परालाई पुन: सिर्जना गर्नुहोस्.
तपाईं युरोप मा धन्यवादको लागि ब्रुग्स गएर गलत जान सक्छ. तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो शहर एक रेल मा हप सारा अनुभव अतिरिक्त अविश्वसनीय बनाउन! र हामी तपाईंको छुट्टी पूरा हुने बित्तिकै निश्चित छौं, तपाईं यो साझा हुनेछ5युरोप ब्लग पोस्ट मा धन्यवाद लागि भ्रमण गर्न सर्वश्रेष्ठ शहर.
ओस्लो हाम्रो सबैभन्दा उत्तरी पिकको लागि हो5युरोप मा धन्यवाद लागि भ्रमण गर्न सर्वश्रेष्ठ शहर.
खाना विचार भनेर ती धन्यवादको एक आवश्यक भाग हुने, लन्डनमा तपाईको उचित हिस्सा हुनेछ. खाना यहाँ दृश्य प्रभावशाली र रूपमा राज्य अमेरिका मा एक प्रमुख शहर फिर्ता रूपमा विविध छ. त्यहाँ सबैको स्वाद को लागि केहि हुनेछ.
शहर एक mesmerizingly नीलो को किनारा मा छ आल्प्स को तल ताल, जो लगभग जादुई सुनिन्छ. त्यो वास्तवमा एक्लै तपाईं सही त्यहाँ युरोप मा आफ्नो धन्यवाद खर्च गर्न प्राप्त गर्न पर्याप्त हुनुपर्छ, धन्यवाद शहरको लागि सर्वश्रेष्ठ शहरहरूमा लुगानो हाम्रो सबैभन्दा अनौंठो छनौट हो.
जहाँ अन्त मा जाने निर्णय, तपाईं विचार गर्नुपर्छ रेल द्वारा यात्रा. जस्तै हामी भने धेरै पटक, यी ठाउँहरू केही तपाईं साँच्चै पूरा अनुभव दिन छैन तपाईं रेल द्वारा तिनीहरूलाई भ्रमण नभएसम्म. त्यो बाटो मात्र तपाईं साँच्चै युरोप जादु अनुभव गर्न सक्षम हुनेछ. सम्पर्क बचत एक ट्रेन जतिसक्दो चाँडो टिकट प्राप्त गर्नका लागि किनभने धन्यवाद यहाँ छ!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-visit-thanksgiving-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)